Jordan Henderson Oo Diiday In Uu Heshiis Cusub U Saxiixo Liverpool & Luis Suarez Oo Uu La Midoobi Karo – banaadirsom | BANAADIRSOM
Home Ciyaaraha Jordan Henderson Oo Diiday In Uu Heshiis Cusub U Saxiixo Liverpool &...
Jordan Henderson Oo Diiday In Uu Heshiis Cusub U Saxiixo Liverpool & Luis Suarez Oo Uu La Midoobi Karo – banaadirsom
Jordan Henderson ayaa lagu soo waramayaa in uu doonayo in uu ku biiro banaadirsom Atletico Madrid si uu mar kale uga garab ciyaaro Luis Saurez sida ay sheegayaan wararku kadib markii uu diiday in uu heshiis cusub u saxiixo Liverpool.
Jordan Henderson oo 31 jir ah ayaa lala xidhiidhinayaa in uu isaga tagayo Anfield kadib 10 sano oo uu joogay banaadirsom kadib markii uu joojiyay wadahaladii heshiiska cusub.
Xiddiga khadka dhexe ayay 2 sano uga dhimantahay heshiiskiisa haatan waxana ay kooxdu doonaysaa in ay heshiis cusub ka saxiixato laakiin xiddiga ayaa diiday mushaharka ay kooxdu u soo bandhigtay.
Wargayska The Athletic ayaa sheegaya in ay banaadirsom Atletico Madrid si aad ah u doonaso saxiixa xiddiga khadka dhexe si ay ugu badasho xiddiga Sau Niguez kaas oo lala xidhiidhinayo in uu isaga tagayo banaadirsom.
Xiddiga Jordan Henderson ayaa dhankiisa la sheegayaa in uu aad u doonayo in uu ku biiro banaadirsom Atletico Madrid si uu uga garab ciyaaro xiddiga Luis Suarez oo ay wakhti ku soo wada qaateen Liverpool.
Previous articleSawirro: DF oo shaacisay inay howl-gal culus ku khaarijisay 15 ka tirsanaa Al-Shabaab